नेपालमा भर्खरै ५.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प , केन्द्र विन्दु क हाँ ? – Ap Nepal
नेपालमा भर्खरै ५.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प , केन्द्र विन्दु क हाँ ?
April 5, 2021 1164
काठमाडौं । भर्खरै महशुश गरिएको भूकम्प ५.४ म्याग्निच्यूडको रहेको बताएको छ। । सोमबार राती ९ः१० बजे भूकम्पको धक्का महशुर गरिएको हो । सो भूकम्पको धक्का राजधनीमा समेत महशुस गरिएको थियो ।
Prevप्रचण्डको हि’न्दीमा भाषण-भन्छन्:- “भारतमा मेरो व्या; पक चर्चा रहेछ, अब प्रधानमन्त्री भन्दा माथि हुन्छु”- (भिडियो सहित)
Nextहिम्म तवाली करूणा डोजर अपरेटर चारै तिरबाट हण्डर खाएपछि यस्तो काम गर्दै (भिडियो सहित)